ကမ္ဘ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဝီစကီ ရာမာဇာကီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
News » ကမ္ဘ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဝီစကီ ရာမာဇာကီ	13
Posted by တောင်ပေါ်သား on Nov 4, 2014 in News, World News | 13 comments
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဝီစကီရွေးရာမှာ ဂျပန်ထုတ် ဝီစကီ ( ရာမာဇာကီ ၀ီစကီ ) က နံပါတ်တစ် ရသွားတယ်ဆိုတော့
စိတ်ထဲ ထူးခြားသလို ဖြစ်သွားလို့ပါ ၊
ကျနော်တို့က စကော့ဝီစကီကသာ အကောင်းဆုံးနေရာမှာ အမြဲရှိတယ် လို့ စွဲသိခဲ့ဘူးတာကိုး ၊
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ၀ီစကီတွေရဲ့ အရသာ ၊ အရည်အသွေးစတာတွေကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြသတ်မှတ်ပေးတဲ့
၀ီစကီ အညွှန်းအဖွဲ့ ( ဂျင်မူရေး – ၀ီစကီဘိုင်ဘယ်လ် ) က ရွေးပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ် ၊
daily mail မှာ ဖတ်ရတာပါ ၊
၁ နှစ်အတွင်း ဥရောပအကောင်းဆုံး ၀ီစကီကိုတော့ အင်္ဂလန်က Chapter 14 Not Peated က ရပါသတဲ့ ၊
အခု ဆုရတဲ့ ဂျပန် ရာမာဇာကီ ၀ီစကီကို ၁၉၂၃ နှစ်မှာ စတင် တည်ထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီက ထုတ်တာဖြစ်ပြီး
ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ အရသာ၊ ထူးကဲတဲ့ အနံ့တို့နဲ့ အမှတ် ၁၀၀ မှာ ၉၇ ဒသမ ၅ ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ စကော့ဝီစကီတွေကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ၀ီစကီလို့ ဂျင်မူရေးက သတ်မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ် ၊
၂၀၁၂ မှာ Old Pulteney’s 21 year old ၊ ၂၀၁၄ မှာ Glenmorangie Ealanta ၀ီစကီတို့က ရခဲ့ပါသတဲ့ ၊
အခုတော့ မမျှော်လင့်တဲ့ နေရာကနေ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ပေးစွမ်းနိူင်တဲ့ ၀ီစကီထွက်လာတာဟာ
စကော့ ၀ီစကီ လုပ်ငန်းတွေ အကျဘက်ကို ရောက်လာတာမျိုးများလားလို့ ထင်ကြေးပေးတာတွေလည်း ရှိလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ၊
၂၀၁၅ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ၀ီစကီဆုရခဲ့တဲ့ Yamazaki ၀ီစကီဟာ ပုလင်း ၁၈၀၀၀ ပဲထုတ်လုပ်ထားပြီး
ဗြိတိန်က အကောင်းဆုံး အရက်ဆိုင်တွေနဲ့ အရက်လက်ကားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ပေါင် ၁၀၀ နဲ့ ဝယ်ယူအားပေးနိူင်ပါသတဲ့ဗျာ ၊
ရွာထဲက ကိုကိုတို့ရေ မြည်းတော့ အမြည်းချင်သားနော့ ၊
MAUNG says: မှန်တာ ပြောရရင်ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး ဦးမျိုးရေ ….
စမ်းကြည့်လိုက်ဦး မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ကေဇီ says: အာ့ လေး တိုက် ကြ ပါ..!!
အာ့လေး တိုက် ကြ ဘာ!!!!!!!!
kai says: ‘Best Whisky in the World’ Is No Longer Scottish
NBCNews.com‎ –5hours ago
A Japanese whisky has been named the “best in the world,” upstaging traditionally favored …
The Guardian‎ – 14 hours ago
The World’s Best Whisky Has Been Named and Scotland is Displeased
အလင်းဆက် says: သောက်တော့ သောက်ကျိချင်သားးးးး
ဒီနေ့ ရန်ကုန် ရာသီဥတုလေးနဲ့လေ…
တောင်ပေါ်သား says: ရောင်းဈေး စတာလင်ပေါင် ၁၀၀ ဆိုတော့ တစ်သိန်းခွဲလောက် ရှိမှာ ၊
အမယ်လေးဗျာ ၊ ဂရင်းအပြာနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ပါ့မယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: ..ကြွားတာဟုတ်ဘူးနော်…အဲ့မျိုးနှစ်ပုလင်းရှိတယ်..အငိငိငိ
တောင်ပေါ်သား says: ကချင်အချင်းချင်းဆိုတော့
၂ ပက်လောက် မျှပါလားကွာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: .SINGLE MALT ဆိုတော့ တစ်ယောက်ထဲမော့ရမှာ ကိုမျိုးရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ဂလိုဂျီးလား အိုးးး ပျင်းစရာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ကျွန်တော်နှင့် မသက်ဆိုင်သော ဖြစ်သွားပြိဗျ… အနော်က ဘီယာသမား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: သာဓုဗျာ သာဓု ၊ ဘီယာက ပိုက်ပိုက် ပိုကုန်တယ်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9261
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘီအီးဒီစီဃယော.. ပါပါယောက္ခထီးဦးမျိုးဂျီး
Yae Myae Tha Ninn says: ဦးမျိုး… ဦးကြောင် ရန်လာ စ နေတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.